Maamulka Puntland oo gabi ahaanba xidhay Warshada Kaluunka Qaboojisa oo Ku taalay gudaha Bosaaso
Bosaaso:-Maamulka Puntland ayaa gabi ahaanba xidhay warshad Qaboojin jirtay Kaluunka taasi oo ku taala Gudaha Magaalada Bosaaso, masuuliyiinta warshadaasi oo nala soo xidhiidhay ayaa sheegay inay shaqadii Warshadasi ka socota Gabi ahaanba si toos ah loogu Amaray in la xidho.
Warshadaasi oo lagu magcaabi jiray East Afrika Fishing Company ayaa masuuliyiinta iska leh waxa noo sheegeen inaanay jirin wax danbi ah oo xagooda looga tirinayo Xukuumada Puntland.
Eng. Amed Daahir Maxamuud oo ka mid ah masuuliyiinta warshadaasi oo haatan ku sugan Dalka China ayaa warbaahinta u sheegay inay warshadaasi haatan xidhnayd mudo dhan 5- Bilood taasi oo ay wadaagaan buu yiri Ganacsato Ajaanib ah iyo kuwa Somali ah.
Eng-ka ayaa sidoo kale sheegay in markii warshada la xidhay ay shaqaalihii Ajaanibka ahaa ka dhoofeen dalka taasi oo ayuu ku sheegay wax aad looga naxo.
sawirka mid kamid ah Mulkiilayaasha wershedda la xiray
Masuulkaasi ayaa dhanka kale sheegay in warshada 60% ay maalgashi ku samayteen Ganacsato Ajaanib ah oo badankoodu ka soo jeeda Dalka China, kuwaasi oo waday Mashruucaasi balse ay taasi is hor taageen qaar ka mid ah masuuliyiinta Puntland oo ay badhitaarayaan shakhsiyaad Somali ah.
Sidoo kale Axmed Daahir ayaa xusay inay Safaarada Somaliya ee Pakin ay ka socoto dawad khusaysa Amuuraha warshadaasi taasi oo ay wadaan Ganacsatadii Warshadaasi laga xidhay, isaga oo farta ku fiiqay inay dhawr jeer la hadleen Madaxwayne Cade Muuse kuwaasi oo kala hadlay sidii ooda looga qaadi lahaa warshadaasi.
Maamulka Puntland ayaan ilaa haatan dhankooda ka soo saarin wax jawaab ah oo khuseeye xidhitaanka warshadaasi, iyada oo ay falkaasi xidhnaanshada ah ay canbaareeyeen Ganacsatada Somaliyeed kuwaasi oo Maamulka Puntland ugu baaqay inay arinkaasi ka fiirsadaan.
Mashaariicda Warshadaha ayaa ku soo badana Gobolada Puntland kuwaasi oo ay keenayaan Ganacsato Somaliyeed oo iyagu doonaya inay Dalkooda maalgashi ku samaytaan.